embassynews – Page3– Ministry of Foreign Affairs
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Wang Yi နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး တက်ရောက်
H.E. U Thurain Thant Zin Presents Credentials to President of the Republic of Serbia
International Bazaar 2019 “Love Knows No Borders – Love Makes One Run Faster” တွင် မြန်မာသံရုံး၊ ပေကျင်းမြို့မှ ပြခန်းပါဝင်ပြသ
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး “ပထမအကြိမ် နိုင်ငံတကာ နယ်နိမိတ်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ညီလာခံ” ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်သူ ASEAN Festival 2019 သို့ တက်ရောက်
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာတော့မည့် ထိုင်းသံအမတ်ကြီးအား နှုတ်ဆက်သည့် ညစာစားပွဲကို ဦးဆောင်ကျင်းပ
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်အား သွားရောက်တွေ့ဆုံ
အီဂျစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး Egypt International Badminton Championship ပြိုင်ပွဲ၏ ဆုပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင်က သံဃာဂိုဏ်းပေါင်းစုံညီလာခံနှင့် ကထိန်ပွဲသို့ အဓိကဧည့်သည်တော်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့
(၇၄) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ၊ ဥပဒေရေးရာကော်မတီ (ဆဋ္ဌမကော်မတီ) ၌ Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (FFM) ၊ Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIM) တို့နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က ကန့်ကွက်ဆွေးနွေး
ချင်းမိုင်မြို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးသိန်းတင် ချင်းမိုင်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသစ်အဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သော Mr. Jaroenit Sanguansat အား သွားရောက်တွေ့ဆုံ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ ASEAN-Korea Train အစီအစဉ်သို့ ပါဝင်
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက အာဆီယံ-တရုတ်ဗဟိုဌာန (ASEAN-China Center-ACC) ၏ Joint Executive Board အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်
အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက မြန်မာရုပ်ရှင်ပွဲတော်အား တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်
မြန်မာသံရုံး၊ ပေကျင်းမြို့က အခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်နိုင်ရန် ကူညီပေးခဲ့
Statement by Ambassador Hau Do Suan, Permanent Representative of Myanmar to the United Nations on Agenda Item 109 “Measure to Eliminate International Terrorism” at the Sixth Committee of the 74rd Session of the United Nations General Assembly